Inona no ataon'ny sprint ho an'ny vatanao? - Soa
Tena > Soa > Soa azo avy amin'ny sprint - vahaolana vaovao
Soa azo avy amin'ny sprint - vahaolana vaovao
Inona no ataon'ny sprint ho an'ny vatanao?
Sprintdia iray amin'ireo fampiharana mampipoaka indrindra azonao ataoAza. Feno, feno--kevi-pitantananafanatanjahan-tena - kendrena ny vodiny, valahana, kofehy, quad, zanak'omby ary abs - izay manangana hozatra lava sy mahia. Raha ny marina, atleta matihanina maro no mampiditrasprintamin'ny fiofanan'izy ireo noho izany antony izany.
Ny fanatanjahan-tena tsy tapaka dia misy tombony maro. Izy io dia afaka mampihena ny loza mety hitranga aminao toy ny aretim-po, tapaka lalan-dra, diabeta type 2, ary hatramin'ny homamiadana hatramin'ny 50%. Izy io dia afaka mampihena ny lozam-pifamoivoizana hatramin'ny 30%, ary mino ny ankamaroan'izy ireo fa ara-pahasalamana sy teknika manome hery ara-tsaina lehibe.
hanozongozona proteinina alohan'ny hatory
Na inona na inona antony hampihetsi-batonao, dia misy tombony be azo. Na izany aza, rehefa mieritreritra ny hanao fanatanjahan-tena dia maro ny olona mieritreritra jogging na treadmill avy amin'ny fanatanjahan-tena avo lenta, ity lahatsoratra ity dia mampitaha ny vokatry ny jogging sy ny sprinting ary amin'ny farany manapa-kevitra hoe inona ny fampiharana mety indrindra. Ka ndao aloha hofaritana ny fototra.
Jogging dia fanatanjahan-tena aerobic izay miankina amin'ny oxygen ary mandeha amin'ny hafainganam-pandeha mandritra ny fotoana maharitra. Ny sprinting dia midika hoe mihazakazaka haingana araka izay azo atao mandritra ny fotoana voafetra na lavitra voafetra. Fanatanjahan-tena anaerobika izay miankina amin'ny oksizenina amin'ny voalohany, fa raha vantany vao tsy misy intsony ny haavon'ny oxygen ao amin'ny vatana rehefa tsy manana tanjaka ampy ny vatana, dia mifindra amin'ny fomba anaerobika izy ary mandoro tavy sy glycogen ho an'ny angovo.
Ny sprinting dia sokajiana ho fiofanana ho an'ny elanelam-potoana avo lenta. Ka ny sokajy voalohany mampitaha ny jogging sy sprinting dia ny fahaverezan'ny tavy satria io no iray amin'ireo antony mateti-pitranga hanombohan'ny olona manao fanatanjahan-tena. Araka ny efa voalaza tetsy aloha, ny jogging dia fanatanjahan-tena aerobika ary miankina amin'ny oksizenina indrindra amin'ny angovo nefa tsy manampy fanampiny amin'ny vatana Miala angovo.
Ny fiankinan-doha dia tsy miankina amin'ny oksizenina, ka mandoro tavy ho an'ny angovo. Vokatr'izany dia mandoro tavy bebe kokoa ny sprinting noho ny jogging. Ankoatr'izay, ny sprinting dia mampitombo ny tahan'ny metabolika basal anao mihoatra ny jogging mandritra ny andro.
Ny tahan'ny metabolic basal anao dia ny habetsaky ny angovo ilain'ny vatanao miasa amin'ny fitsaharana. Midika izany fa na dia miala sasatra aza ianao dia hitohy mandoro tavy amin'ny vatanao ny sprinter. Raha ny marina, ny fanadihadiana iray tamin'ny 1994 dia nahatsikaritra fa ny lehilahy sy ny vehivavy izay nandray anjara tamin'ny programa maherin'ny 15 herinandro dia namoy tavy betsaka kokoa noho ireo izay nandray anjara tamin'ny programa maharitra maharitra 20-herinandro.
Ny session sprint mahazatra dia misy 30 segondra ny sprint total arahin'ny 4 minitra fitsaharana ary averina in-4-6. Midika izany fa ny fampihetsehana sprint dia mitaky fampiofanana 3-4 minitra fotsiny, izay midika fa mandoro tavy bebe kokoa ny sprint ary tsy dia mila fotoana firy hanaovana azy noho ny jogging. Ny sokajy faharoa dia ny fitomboan'ny hozatra.
Tokony ho hitanao fotsiny ny tsy fitovian'ny mpihazakazaka hazakazaka hazakazaka sy ny sprinter hahafantarana ny valiny. Na dia samy mikendry ny vondrona hozatra iray aza ny fanazaran-tena roa, ny sprinting dia mahatonga ny hozatry ny tongotra hifintina haingana kokoa noho ny jogging, izay miteraka fahavoazana hozatra bebe kokoa ary noho izany dia mampihetsika ny rafitra fananganana hozatra amin'ny vatana hananganana hozatra bebe kokoa. Ankoatr'izay, ny sprinter dia miteraka famoahana hormonina fitomboan'ny olombelona bebe kokoa, izay fananganana hozatra sy hormonina mandoro tavy.
Mora ny mahazo an'io sokajy io ny sprinting. Antony iray mahazatra ny fampihetseham-batana ho an'ny olona noho ny fananany fitsaboana, ary noho izany ny sokajy farany dia ny fahasambarana sy ny fihenjanana. Ny fandinihana natao tamin'ny 2017 avy amin'ny University of Turku dia nahatsikaritra fa ny fampihetseham-batana mafy dia namoaka endorphins betsaka kokoa noho ny jogging adiny iray.
Endorphins dia hormonina ao amin'ny vatantsika izay mampiakatra ny fanahintsika ary mamorona fahatsapana fialan-tsasatra ary mamoaka bebe kokoa azy io rehefa mihazakazaka. Ny fandinihana iray hafa tamin'ny 2014 dia nahatsikaritra fa ireo mpandray anjara izay nandray anjara tamin'ny fampihetseham-batana avo lenta dia nankafy ny fampiasan'izy ireo bebe kokoa ary mety hitohy kokoa noho ireo izay niaritra fiofanana. Rehefa dinihina tokoa, araka ny voalaza tetsy aloha, ny sprinting dia mamoaka hormonina mitombo sy testosterone mitombo ary ireo hormonina ireo dia mampihena ny haavon'ny kortisol ao amin'ny vatana.
Ny adin-tsaina amin'ny alàlan'ny fanadihadiana marobe ary mampihena ny haavon'ny haavony. Raha fintinina dia azo lazaina fa ny olona izay mihazakazaka mamokatra hormonina fahasambarana bebe kokoa, mamokatra hormonina miady saina kely kokoa, ary mirona hiofana mandritra ny fotoana maharitra. Betsaka ny lafin-javatra tokony hodinihina rehefa mifidy ilay fanatanjahan-tena, fa aorian'ireo lafin-javatra telo noresahina tato amin'ity lahatsoratra ity, ny hazakazaka am-pitoerana no mpandresy mazava.
Voalaza fa ny sprinter dia p Mampitombo ny tsindry amin'ny vatana sy ny tonon-taolana ary afaka mampitombo ny mety ho ratra amin'ny fotoana maharitra. Ankoatr'izay, noho ny hamafiny, dia tokony hialan'ny olona voan'ny aretim-po, tosidra na olana amin'ny taovam-pisefoana izy io ary mety hitera-doza bebe kokoa. Farany, miankina amin'ny tanjona, fahaiza-manao ary ny tombontsoany manokana ny hoe mihazakazaka na mihazakazaka.
Ny roa dia endrika fanatanjahan-tena tsara ary na inona na inona nofidinao; Mbola afaka mankafy ireo tombontsoa marobe amin'ny fanatanjahan-tena ianao. Raha nankafy an'ity lahatsoratra ity ianao dia miasà azafady amin'ny fantsona ary jereo ireo lahatsoratra hafa.
Aleo mihazakazaka na mihazakazaka?
rahahazakazakamanampy amin'ny fandoroana kaloria ihany koa, hoy ny manam-pahaizanasprinttoy ny endrika kardio tsara indrindra amin'ny fitazonana lanja salama sy mijanona amin'ny endrika. Nasehon'ny fandinihana fa afaka mandoro kaloria 200 ianao ao anatin'ny roa minitra sy sasany fotsiny misy fiatraikany lehibesprint.23 feb 2021
Impiry aho no tokony hanao sprint?
Entina. fampidiranasprintamin'ny fanazaran-tena ataonao dia fomba mahomby sy mahombynymampiofana ny rafitra anaerobika anao, mandoro kaloria ary manatsara ny hozatry ny hozatrao amin'ny tongotrao. Satria ireto karazana fampihetseham-batana ireto dia mitaky be dia be, ianaotokonymanao ihanysprintelanelam-potoana roanytelo andro isan-kerinandro.8 jol. Desambra 2019
Ny hazakazaka dia fanatanjahan-tena marobe toy izany izay azonao atao amin'ny toerana rehetra, amin'ny fotoana rehetra, fa ohatrinona no tokony hataonao anio? Eto Girona aho ka nieritreritra fa aleoko mahazo ny fanampian'ny Maya Maya mpampiantrano ny GCNspaniel, misaotra anao noho izany aminay izao, aza mety hofitahina ianao amin'ny hoe azo antsoina hoe mpitaingina bisikileta i Maya satria tena nanana maro izy taona fifaninanana ho triathlete matihanina. Misaotra Heather eny nandany fotoana be dia be tamin'ny bisikileta, nilomano ary mazava ho azy fa mihazakazaka aho ary fantatro fa na ianao raha vao mihazakazaka, na te hampitombo ny kilaometatra na hampiodina ahy dia tena sarotra ny mankany ny teboka mety indrindra hahitana izany, eny, ankehitriny dia manome torolàlana anao izahay momba ny impiry isan-kerinandro tokony hihazakazanao Tsy mora toy ny mihazakazaka bebe kokoa, mihazakazaka haingana kokoa, raha tsy mitandrina ianao dia hiafara amin'ny ratra amin'ny tenanao ianao Ho hitanao fa tonga hatrany amin'ny lembalemba ny zava-bitanao ary raha tsy mbola nahazo ny birao ianao ary narianao ny kiraronao, eny, tsara tokoa ny mihazakazaka ho an'ny fahasalamanao izay ho an'ny fahasalamanao ara-tsaina. Heveriko fa ianao dia mirona hijanona ary ankafizo fotsiny ny tenanao fa mila mitandrina tsara ianao fa tsy miady saina Hanome torolàlana ho anao izahay fa tena tokony apetrakao amin'ny fiainanao izany raha vao manomboka mihazakazaka ianao ary vao manomboka vao manomboka, tena ilaina tokoa ny manangana zavatra tsikelikely miakatra mba hananan'ny vatanao fotoana hanamorana izany fanentanana vaovao. Ka raha mpihazakazaka vaovao ianao ary mihazakazaka roa isan-kerinandro fotsiny dia azonao atao ny mampitombo izany intelo isan-kerinandro - manana iray farafahakeliny iray andro aorian'ny fihazakazahana tsirairay mba hahafahan'ny vatanao miala sasatra sy manamboatra, ary rehefa manomboka To ampitomboy ity, alao antoka fa mihaino ny vatanao foana ianao, eny ary raha efa nihazakazaka nandritra ny fotoana kelikely ianao ary efa zatra izany dia ampiasainao indray hanatsarana ny fitaizanao na hiasa mba hahazoana azy mihazakazaka telo fotsiny ny fitazonana fihodinana efatra isan-kerinandro dia tanjona fotsiny raha toa ka mihazakazaka telo isan-kerinandro ianao izao nefa mahatsapa fa manam-potoana sy hery ianao hanaovana hazakazaka fanampiny dia mendrika izany raha heverinao hohafohezinao ny iray amin'ireo fihazakazahana ankehitriny ireto ary manana angovo ianao hanampy 1/4 eny ary manandrana manao ny hazakazakao mandritra ny 20 minitra farafahakeliny fa manampy fanampiny fanampiny isan-kerinandro na dia fohy aza izany e Raha mihazakazaka amin'ny fifaninanana ianao dia toerana tsara hanombohana dia raha ny marina amin'ny andro fialantsasatra iray ka ny vatanao dia manana andro iray manontolo hamerenana amin'ny laoniny.
Ekena aloha fa ny ankamaroantsika dia miasa mandritra ny fito andro eo ho eo, isa hafahafa izany ary eny azonao atao ny manohy ity hazakazaka isan'andro ity, fa raha ny tena izy dia manana fotoana bebe kokoa ho anao izahay amin'ny faran'ny herinandro ka misy dikany ny fanananao mihazakazaka lava kokoa amin'ny fotoana mitovy isan-kerinandro. Eny, ary raha te-hihazakazaka ianao dia mila rafitra bebe kokoa amin'ny drafitrao, saingy tsy midika izany fa hihazakazaka bebe kokoa ianao. Azonao atao ny manatsara ny fahombiazanao amin'ny fihazakazahana inefatra isan-kerinandro, saingy tsy maintsy ataonao amin'ny alàlan'ny fampiofanana miandalana sy fampiofanana mavesatra izany ao an-tsaina, ity misy torolàlana ho an'ny rafitra malemy, apetraho ny ay anao ho andro fanarenana, ary Ny alakamisy dia mihazakazaka miasa ny asabotsy ho famerenana amin'ny laoniny ary avy eo ny fihazakazahana amin'ny asabotsy asa fanaovana safidy tsy voatery Raha te hampitombo ny fihazakazanao hatramin'ny dimy heny isan-kerinandro dia diniho ny fakana ny fivoriana fanarenana ny alarobia ary ampifamadiho izany ary ataovy izay hihazakazahana mora, ataovy izay hihazonana ny hamafiny ho tsara sy ambany ary raha any amin'ny faran'ny spectrum ianao ary mahita be loatra, azonao atao ny manapaka azy hatramin'ny telo amin'ny alàlan'ny fifanakalozana ny hazakazaka asabotsy ho an'ny fotoam-pampiofanana, na inona na inona hamafiny, hafainganana ary elanelana, io dia rafitra mafy orina hananganana satria ny vatanao afaka manao fanatanjahan-tena miaraka aminy mba ho ao amin'ny session Izy dia tena tsara amin'ny famelana azy hiala sasatra sy hiala sasatra eo anelanelany.
Ny fitoniana sy ny fanarenana dia tena mila hajaina, saingy tiako ny manasongadina fa misy fahasamihafana lehibe eo amin'izy roa, ankehitriny natolotro ny alatsinainy ho andro fitsaharana ary tena tokony hisy izany, koa tsy midika fotsiny izany hoe tsy mihazakazaka. fa tsy misy fanazaran-tena na fanaovana fanatanjahan-tena mihitsy ary eny fantatro fa mbola mila mandeha an-tongotra miasa ianao ary tsy miteny aho hoe te hijanona eo am-pandriana tontolo andro ianao fa mety ho an'ny sainao sy ny vatanao fotsiny ny miala sasatra tontolo andro ary tena zava-dehibe io mba hahazoana antoka fa mijanona ho salama ianao ary mampihena ny loza mety hitranga amin'ny aretina sy ny fampihetseham-batana ary tsara tokoa, tsara raha mandeha mankafy fotsiny amin'ny alatsinainy izao, satria hiasa mafy ianao amin'ny sisa amin'ny herinandro mba ho sitrana, mitovy amin'izany , manome fiatoana amin'ny vatanao amin'ny fihazakazahana ity mba hahafahako mampifanaraka ny enta-mavesatry ny fiofanana tamin'ny andro teo aloha, saingy tsy mitovy izany satria mihetsika isika ary mandrisika ny fivezivezena indray izahay mba ho sitrana ny vatantsika, amin'izao andro izao ianao mety hanakorontana ny zava-drehetra, fa tsy maintsy manalavitra ny fihazakazahana ianao tsy fampihetseham-batana ary noho izany dia tsy natao hanatsarana ny fitaizam-panahinao, fa eo ihany ny fanampiana ny vatanao hiomana amin'ny tendanaoFrano, ohatra, afaka mandeha mitsangatsangana mankany an-tanàna amin'ny bisikileta ianao ary mijery fa tianao ny kilasy na milomano ao. dobo eo an-toerana tsara fa tsy maninona na impiry impiry ianao no mikasa ny hihazakazaka isan-kerinandro fa raha te hampitombo an'ity ianao dia alao antoka fa manao izany tsikelikely ianao ary tsara ny manamarika fa mihazakazaka ny ataon'izy ireo, ary amin'ny haavo avo kokoa dia manome bebe kokoa azy io adin-tsaina amin'ny vatanao. Mazava angamba izao fa tsy misy fitsipika mainty sy fotsy momba ny isan'ny tokony isokafanao isan-kerinandro. Ianao irery ihany no afaka mandray an-tsaina ireo anton-javatra rehetra amin'ny fiainanao miaraka amin'ny tanjonao manokana ka araho ny mpitari-dalana anay, fa amin'ny farany dia mila mihaino tsara ny vatanao ianao, misaotra an'i Maya fa efa niaraka taminao aho hatramin'ny andronao, misaotra anao Heather noho ny fananako ahy ary antenaiko fa nankafizinao ity lahatsoratra ity toa ahy.
Hamarino tsara fa hanome azy ankihiben-tanana izy ary aza adino ny misoratra anarana amin'izao tontolo izao. Raha te hahita ny lahatsoratray momba ny fomba hatanjaka kokoa amin'ny bisikileta ianao dia tsindrio eto ambany ary raha marary ianao mandeha ary te hahalala hoe rahoviana no hijanona ary rahoviana no handalo, dia afaka mahita lahatsoratra momba azy eto ianao
Firy andro isan-kerinandro aho no tokony hihazakazaka?
manaosprintfanazaran-tena fanazaran-tena teloisan-kerinandro. Mamela iray hatramin'ny roa farafaharatsinyandrofitsaharana na fanatanjahan-tena mora eo anelanelan'nysprintfampiofanana.5 mart 2021
Afaka manao sprint isan'andro ve aho?
Ny fikarohana dia mampiseho fa ny fiofanana elanelam-potoana avo lenta amin'ny endrikasprintisaky ny andro hafaafakamanatsara ny fahatsapana insuline amin'ny lehilahy amin'ny 23%. Fa,sprintmandoro tavy betsaka kokoa amin'ny hafainganam-pandeha avo kokoa - kaloria 200 eo ho eo ao anatin'ny 3 minitra - noho ny mihazakazaka.
Mety hanimba ny fonao ve ny sprint?
SYnymikorontana mikoriananyra mandalonyny arteria coronary mandritra ny fihazakazahana dia mety hitondra anjara biriky amin'nynyfiofanananytakelaka manentsina artery, mampiakatranymetyamin'ny fofanafihana (nyfanivanananyfikorianan'ny rà mankanyny fofaafaka, kosa, mitarika fisamborana aretim-po tampoka, izayny fonaomijanona tanteraka).27 Sep 2016
Mety ve ny mihazakazaka sprint isan'andro?
Ireo endrika roa fanazaran-tena ireo dia mampitombo ny fatran'ny metabolisma anao - izay tena manakiana. Ny fikarohana dia mampiseho fa ny fiofanana elanelam-potoana avo lenta amin'ny endrikasprintisan'andro dia afaka manatsara ny fahatsapana insuline amin'ny lehilahy amin'ny 23%. Fa,sprintmandoro tavy betsaka kokoa amin'ny hafainganam-pandeha avo kokoa - kaloria 200 eo ho eo ao anatin'ny 3 minitra— noho nymihazakazaka.
Mety amin'ny ati-doha ve ny Sprinting?
tsara kokoaCognition sy memory retention - aseho ny fanadihadianasprintmampihena ny fivontosan'nyatidohaary manatsara ny fifandanjan'ny hormonina.atidohamitombo ny plastika amin'ny fanaovana fanatanjahan-tena, ary mitombo koa ny rà, indrindra ao amin'ny hippocampus, izay ampahany amin'ny rafitra limbic fantatra amin'ny fianarana sy ny fitadidiana.10 Mar 2014
Mety ve ny manao sprint isan'andro?
Ireo endrika roa fanazaran-tena ireo dia mampitombo ny fatran'ny metabolisma anao - izay tena manakiana. Ny fikarohana dia mampiseho fa ny fiofanana elanelam-potoana avo lenta amin'ny endrikasprintisan'andro dia afaka manatsara ny fahatsapana insuline amin'ny lehilahy amin'ny 23%. Fa,sprintmandoro tavy betsaka kokoa amin'ny hafainganam-pandeha avo kokoa - kaloria 200 eo ho eo ao anatin'ny 3 minitra - noho ny mihazakazaka.
Mandrehitra tavy ny kibo?
Alakamisy 6 Jolay 2012 -Sprint, tsy jogging, mety ho lakilen'ny fifadian-kaninakiboary visceralmatavyfatiantoka, mpikaroka ao amin'ny University of South Wales dia nahita tamin'ny fanadihadiana navoaka tao amin'ny International Journal of Obesity. r.
Inona avy ireo tombontsoa ara-pahasalamana sy ara-pahasalamana amin'ny sprint?
Ny sprinting dia manome tombontsoa ara-pahasalamana sy fanatanjahan-tena. Ny hazakazaka Sprint dia iray amin'ireo fanazaran-tena sarotra indrindra misy. Rehefa mihazakazaka ianao dia mitombo ny tahan'ny fitempon'ny fonao mba hanonerana ny fitomboan'ny filan'ny rà mankany amin'ny hozatrao. Ny karazana fanatanjahan-tena roa dia ny anaerobika sy aerobika.
Fa maninona no tsara ho anao ny mihazakazaka eny amoron-dranomasina?
Fialan-tsiny tsara ny mankany amoron-dranomasina. Ny fanaovana ny sprint amin'ny fasika dia mahomby kokoa (sy mafy kokoa). Fikarohana vao haingana iray no nahitana fa ny fotoam-pampiofanana haingam-pandeha natao tamin'ny fasika dia nanjary fampisehoana tsaratsara kokoa tamin'ny fifaninanana fiofanana manaraka, ka nikapoka ny ahitra ho toy ny faritra fiofanana.
manakana ny vitamina ve ny tabilao masoandro d
Ratsy ve ny mandeha Sprint amin'ny fotoana rehetra?
Ity misy loza iray hafa tsy tokony ho adino: na eo aza ny programa fanaovana fanatanjahan-tena miaraka amin'ny loza mety hitranga, dia mety hampitombo izany risika izany ny ezaka manontolo toy ny sprinting satria mametraka adin-tsaina bebe kokoa amin'ny faritra rehetra amin'ny vatanao izy ireo. Tsy zavatra ratsy foana izany - ny haavon'ny hamafiny no mahatonga ny fampihetseham-batana ho fanatanjahan-tena mahomby sy mahasoa.